Ry Ada sy Zila ô, mihainoa ny feoko; Ry vadin’i Lameka, mitandrema ny teniko: Veloma ianao, mba anomezo ahy kely ny dodaiman’ny zanakao. Tsia, fa Saraha vadinao hiteraka zazalahy aminao; ary ny anarany dia hataonao hoe Isaka; ary ny fanekeko haoriko aminy ho fanekena mandrakizay ho an’ny taranany mandimby azy. Manao ahoana izany nofy efa nonofisinao izany? Indro, ny tompoko tsy mahalala izay tandremako ato an-trano, fa izay rehetra ananany dia efa natolony ho andraikitro avokoa. Indro, fa efa sahy niteny tamin’ny Tompo aho nefa vovoka sy lavenona: Mba ataovy ato ambanin’ny feko ny tananao; 3 fa hampianianiko amin’i Jehovah, Andriamanitry ny lanitra sy ny tany, ianao, fa tsy haka vady ho an’ny zanako avy amin’ny zanakavavin’ny Kananita izay iraisako monina ianao; 4 fa any amin’ny tanin-drazako sy amin’ny havako no halehanao haka vady ho an’Isaka zanako.
Nom: baiboly malagasy pdf
Tsy ao ny zaza, ary izaho, aiza no halehako? Aza hihinanareo na tendrenareo izany, fandrao maty ianareo. Aza ihinananao izany, dia voaozona ny tany noho izay nataonao; fahoriana no hihinanao ny vokany amin’ny andro rehetra hiainanao. Tsy mba handringana azy Aho noho ny roa-polo. Aoka samy hanao fianianana isika, dia izahay sy ianao, ary aoka izahay hanao fanekena aminao, 29 fa tsy hanisy ratsy anay ianao, tahaka ny tsy nanendrenay anao akory, sy tahaka ny tsy nanaovanay na inona na inona taminao afa-tsy ny soa ihany, fa efa nampandehaninay soa aman-tsara ianao. Angamba efa-polo no ho hita ao. Raha sitrakareo ary ny handevenako ny fatin’ny vadiko mba tsy ho eto anatrehako, dia mihainoa ahy, ka mba iangavio kely amin’i Efrona, zanak’i Zohara, 9 mba homeny ahy ny zohy ao Makpela izay azy, dia ilay eo amin’ny sisin’ny sahany; amin’izay vola tokombidiny no aoka hanomezany azy ho ahy eto aminareo ho tany fandevenana.
TÉLÉCHARGER TAIRO & PYROMAN - AUTOUR DU MONDE GRATUITEMENT
Vadiko izy, fandrao, hoy izy, hamono ahy ny lehilahy tompon-tany noho Rebeka, satria tsara tarehy izy. Mba henoy kely ange izao nofy izao: Solon’Andriamanitra, Izay nahamomba anao tsy hiteraka, va aho?
Tsy mbola hihinana aho, raha tsy efa voalazako ny raharahako. Aoka hanaiky ny teniny ihany isika, dia hiara-monina amintsika izy. Inona ary no homenao ahy, raha handry amiko ianao? Hanisy soa anao tokoa Aho, ka hataoko maro ny taranakao ho tahaka ny fasika any an-dranomasina, izay tsy azo isaina noho ny hamaroany.
Moa zavatra kely va ny nakanao ny vadiko? Angamba efa-polo no malaggasy hita ao. Angamba tsy hety hiaraka amiko ny vehivavy.
Firenena roa no ao an-kibonao; ary vahoaka roa toko no hisaraka hatrao ambohokanao; ary ny vahoaka iray toko hahery noho ny iray toko. Anabaviko izy; fa natahotra hilaza hoe: Ary ny ony fahefatra dia Mapagasy. Indro, tsy ho amin’ny tsiron’ny tany ny fonenanao, ary tsy ho amin’ny andon’ny lanitra avy any ambony; 40 Fa ny sabatrao no hivelomanao, ary ny rahalahinao no hotompoinao; kanefa, raha mby amin’izay andro hahafahanao.
Mba horaisinao avy amin’ny tanako ireo ondrivavy kely fito ireo ho vavolombelona amiko fa izaho nihady io lavaka fantsakana io. Tsara ihany va izy? Anabaviko izy; dia naniraka Abimeleka, mpanjakan’i Gerara, nampaka an’i Saraha.
Ary nomeny azy ireny, dia nandry taminy izy, ka nanan’anaka taminy ravehivavy. Hahabe dia hahabe ny fahorianao Aho, indrindra fa raha manan’anaka ianao; ary fahoriana no hiterahanao zanaka; ary ny vadinao no hianteheran’ny fanirianao, ka izy no hanapaka anao.
Jakoba no anaranao; nefa tsy hatao malaagasy Jakoba intsony ny anaranao, fa Isiraely ny anaranao; dia nataony hoe Isiraely no anarany. Hiteraka va aho, izay efa zato taona?
Baiboly – Heviteniny – FPMABX
La présente page de téléchargement du fichier a été vue fois. Misotroa, ary hantsakako koa ny ramevanao: Mpisafo ianareo; hizaha ny fangadihadin’ny tany no nahatongavanareo. Efa hita mihi-tsy fa vadinao izy, ka nahoana no nolazainao hoe: Malagawy, fa ho faty ianao noho ny vehivavy izay nalainao, fa vadin’olona izy.
Ary Saraha nandre izany teo am-baravaran’ny lay, izay teo ivohon’Ilay niteny. Mpisafo ianareo no marina; 15 dia izao àry no hamantarana anareo: Aoka anie mba tsy ho tezitra ny Tompo, fa mbola hiteny aho: Chapitre 41 1 [Ny nilazan’i Josefa ny nofin’i Farao, sy ny nanandratana azy ho mpanapaka any Egypta] Ary rehefa afaka roa taona mipaka, dia nanonofy Farao, fa, indro, nitsangana teo amoron’i Neily izy. Miverena any amin’ny tompovavinao ka miareta izay ataony aminao.
Aoka hahita fitia eto imason’itompokolahy aho. Indro, eo an-tananao ihany ny mpanompovavinao; ataovy aminy izay sitraponao.
Pdff nitsinjo ny fahoriako Jehovah, fa ankehitriny dia ho tian’ny vadiko aho. Hemdana sy Esbana sy Jitrana ary Kerana. Aza mba ho hitako anie izay hahafatesan’ny zaza.